Ahịhịa Grass | Martech Zone
Mmelite: The Nsonaazụ dị na mkpọsa a! 4,911% okporo ụzọ na-abawanye site n'April ruo May; 144,843 video echiche na 162 kwuru; 1,500 tweets; 120 blog posts n'otu ọnwa; Tweets si Guy Kawasaki, Kevin Rose, na Jason Calacanis; 7 mba TV kwuru.
Tonight m nwetara n’ụlọ wee nata FedEx degaara blọgụ m site Grasshopper. N'ụzọ dị ịtụnanya, m mepere ngwugwu ahụ wee chọta ngwugwu nke ezigbo ụgbụ mmiri kpuchiri - ugbu a ọ bụ mkpọsa ahịa!
Guo ezigbo ebipụta! Ngwungwu ahụ zoro aka na ozi sitere na ya Grasshopper nye ndị ọchụnta ego:
Ewi nwere ike ọ gaghị abụ ihe ị chere! Ọ bụ n'ezie ihe integrated mebere ekwentị usoro (mebere pbx) gị ụlọ ọrụ na-agụnye ọnụ ọgụgụ free nọmba, ebugharị ike n'ụlọ, mobile, ụlọ ọrụ… na ọbụna online ozi olu ozi email ike. Ọnụ ego na-adabere na ngwugwu ị ga - achọ - mana ha na - amalite na $ 9.95 kwa ọnwa wee ruo $ 199 kwa ọnwa.
Adị m ọkpọ maka mkpọsa ahịa nke si na igwe mmadụ pụta ma nke a bụ otu n'ime ha! Ọ ga-amasị m ịmụtakwu banyere etu Grasshopper si kpebisie ike na ndị ọchụnta ego bụ ndị na-ege ntị maka mkpọsa a. Ana m atụ anya ịchọta otu mkpọsa ahụ si arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ọ kpatara na enwetala ego, ọ ga-eme ka a mara Grasshopper!
Ọ ga-abụ ihe na-akpali mmasị ịhụ otu ọrụ ga-esi asọmpi ma jigide ya Google Voice mgbe ọ na-aga n'ihu. O yiri ka Grasshopper nwere ụfọdụ ọrụ siri ike, mana ọnụahịa na akara nkeji nwere ike igbochi ụfọdụ obere azụmaahịa.
Banyere ụyọkọ chọkọlet kpuchiri, m gbalịrị otu, otu enyi ezinụlọ ahụ emekwara. Ọ nụrụ ụtọ dị ka chocolate… na ntakịrị nke crunch. Nwa m nwoke na nwa m nwaanyị nwalere otu.
Tags: emailNgwa ngwa ahịaJabọnJiraJotFormKanbanToolIclọ nyocha KickoffDabereN'aka ekpeỌgụgụ dị ntaísìsìLiquid PlannerLockitronAkwụkwọ ozi
Mee 13, 2009 na 10: 26 AM
Daalụ maka nnukwu ide ihe. Obi dị m ụtọ na ị natara ụkpara na-atụ anya na ị nwara otu.
Ọ ga-amasị m igosi gị ihe abụọ ikwuru. Nke mbụ, banyere ịdị ndụ. Anyị ejeela ozi karịa ndị ọchụnta ego 70,000 ruo ugbu a (http://grasshopper.com/about) ma gaa n'ihu na-eme ka ọrụ ahụ ka mma dabere na nzaghachi. Nke abuo, banyere Google Voice. Dịka ọrụ ndị ahịa, Google Voice dị oke mma. Ebee ka Grasshopper si di iche na emeputara ya dika ngwa ahia. Mgbatị maka ndị ọrụ na ngalaba, kpọọ usoro mbugharị, ọnụ ụzọ ntanetị siri ike, ntụkwasị obi, yana nkwado 24/7. N'ụzọ bụ isi, ndọtị gị nke Grasshopper nwere ike ibugharị na nọmba ekwentị Google Voice gị ka ọ nwere ike itinye na Blackberry gị, ekwentị ụlọ gị, wdg.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale ọrụ ahụ, biko mee ka m mara.
Mee 13, 2009 na 9: 54 PM
Daalụ nke ukwuu maka ịzaghachi! Amaara m nke ọma na enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti azụmahịa na ngwa ndị ahịa - a na-ewere isi okwu gị. Ekele maka uto na ihe ịga nke ọma gị. Amaghị m na m ga-enye ngwa gị nke ọma anya… mana na-arụ ọrụ n'ọtụtụ mmalite, m ga-enwerịrị Grasshopper na ndepụta m nke ngwa iji nwalee.